Shiinaha 3D TPE Dhammaan-cimilada Baabuurta sagxadda sagxadda sagxadaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Isku hallaynta
Talooyin: Gudaha baabuurka waa lagama maarmaan in la isticmaalo qalabka ilaalinta deegaanka ee heerkulka sare leh, sababtoo ah booska baabuurka ayaa xaddidan, heerkulka baabuurka xagaaga wuxuu noqon karaa mid aad u sarreeya 60 ℃, qalabka ilaalinta deegaanka ee aan deegaanka ahayn heerkulka sare. waxa laga yaabaa inay soo saaraan walxo sun ah oo baabuurka lagu ururiyey, kuwaas oo waxyeello u leh caafimaadka dadka.
Qalab TPE Miisaanka 2.5-3.5kg
Nooca Sagxadaha baabuurka Dhumucda 2-3mm
1.Sagxadaha gaarigaaga ka dhig mid nadiif ah oo cusub. Sagxadaha sagxada cimiladu oo dhan waxay ku habboon yihiin gaadhiga oo leh nashqad gaar ah oo cidhifyo sare leh iyo saxsanaan-engineered si aad uga ilaaliso gaadhigaaga qaaliga ah ciidda, wasakhda, dhoobada, barafka, daadanaya, iwm.
2.Ku habboonaanta caadada waxay ku saleysan tahay cabbirka laysarka 3D si loo hubiyo cabbirka qumman. Wuxuu wataa 3 qaybood: Darawal, Rakaab iyo Dhabar.
3. Sagxadaha sagxaddu aad bay u fudud yihiin, taasoo ka dhigaysa mid aad u fudud in la nadiifiyo oo la dayactiro.
4.Ma jiro ur aan caadi ahayn, boqolkiiba 100 dib loo warshadayn karo oo aan lahayn cadmium, rasaas, cinjir iyo PVC. Badbaadada adiga iyo qoyskaagaba.
Ma jiro macaanka cunta-cunista, Ma laha saxmad-brake, Ma jiro saxmad-socod
Midabada kala duwan waxay sameeyaan khibrad wadista kala duwan
Wuxi Reliance Technology Co., LTD waa soo-saare xirfad leh oo soo saarta alaabta gudaha baabuurta, oo ku taal meel u dhow harada quruxda badan ee Tai oo leh gaadiid sahlan. Tan iyo markii la aasaasay 2005, shirkaddu waxay u heellan tahay cilmi-baarista iyo horumarinta, naqshadeynta, soo-saarka iyo iibinta qalabka gudaha ee baabuurta iyo qalabka la xiriira. Shirkadu waxay inta badan soo saartaa caafimaad badan, badbaado badan, deegaan saaxiibtinimo badan iyo gogosha baabuurta ee waarta iyo agabka. Shirkaddu waxay fulisaa maarayn cilmiyeed oo horumarsan, waxay dejisay nidaam hubinta tayada adag, waxayna ku gudubtay shahaado nidaamka maaraynta tayada, si tayada alaabadu u hesho dammaanad la isku halayn karo. Shirkaddayadu waa alaab-qeybiyaha shirkado badan oo baabuurta gudaha ah oo caan ah; Isla mar ahaantaana sidoo kale waa alaab-qeybiyaha muddada-dheer ee in ka badan 1000 ka ganacsada baabuurta gudaha.
Hore: 3D Dhammaan-cimilada Gaarka ah ee Dahaarka Dabaqa
Xiga: Sagxadaha Suede Custom Fit Dabaqa
Sagxada Boot Baabuurka
Sagxada Baabuurka Classic
Beddelka Sagxada Baabuurka
Noocyada Sagxada Baabuurka
Dhammaan moodalka cusub ee Tesla 3/Y XPE iyo TPE Double-lakab...
Sagxadaha Suede Custom Fit Dabaqa
Mercedes Benz E Al-Xilli-xilli-xilliyeedka Gaadhi Maqaasyo Gaadhi ah oo Taam ah...
Sagxadaha Baabuurka ee Cimilada oo dhan 3D XPE (3...